Warbixin xaaladda carruurta adduunka - BBC Somali - Warar
Warbixin xaaladda carruurta adduunka
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 30 Mey, 2013, 16:00 GMT 19:00 SGA
Mid ka mid ah carruurta naafada ah
Warbixin sanadkiiba mar ay ka soo saarto xaaladda carruurta adduunka, ayaa hay'adda UNICEF waxay ku sheegtay in haddii carruurta naafada ah lagu taageero waxbarasho iyo waxyaabaha ay qaban karaan ay taasi dan u tahay carruurta laf ahaantooda iyo guud ahaan bulshada oo dhan.
Agaasimaha fulinta ee UNICEF, Anthony Lake, waxaa uu sheegay in marka naafanimada aad aragtid inta aadan ilmaha eegin aysan taasi khalad ku ahayn ilmaha oo keliya, balse ay bulshada oo dhan u diideyso wixii ilmahaas laga heli lahaa.
"khasaaraha carruurta naafada ah waa khasaare bulshada soo gaaray, faa'iidada carruurtaasina waa faa'iidada bulshada", ayay sheegtay UNICEF.carruur badan oo naafo ah, bulsho ka saariddu waxay u bilaabataa markay dhashaan iyadoo aan la diiwaan gelin dhalashadooda. la'aanta aqoonsi rasmi ah, waxay carruurtaasi ka goysaa adeegyada bulshada iyo difaac shari inay helaan taas oo muhiim u ah noloshooda iyo rajada mustaqbalkooda.
carruurta naafada ah waxay ka mid yihiin dadka adduunka loogu takoor badan yahay. Waxay ku nool yihiin saboolnimo inta badanna ma dhacdo inay dugsi aadaan ama isbitaal lagu daweeyo.
Warbixinta UNICEF waxay dowladaha adduunka oo dhan ka codsanaysaa inay ka soo baxaan ballammadoodii ahaa inay muwaadiniintooda xuquuq siman siiyaan. hay'adaha caalamiga ahna waxaa lagu boorriyay in talooyinka iyo mucaawinada ay waddammada siiyaan ay ku dhisnaato xuquuqda carruurta iyo heshiiskii xuquuqda dadka naafada ah.